New Factory Gaoyi Bazi yakatangwa!
na admin on 20-04-28
1. Kune iyo ichangobva kutengwa dombo kudhiraivha, nekuda kwematanho ekudzivirira ekutakura, pachave paine anti-ngura mafuta mukati. Ive neshuwa yeku disassemble uye kubvisa iyo isati yashandiswa, uye smear lubricant pane zvese zvinofamba zvinhu kana uchidzoreredza. Basa risati rasvika rinofanira kuvhurwa pane sm ..
Fekitori yedu nyowani inowanikwa muGao yi Hi tech zone, 3 yakakura kupfuura fekitera yekare, 2 yakawanda mitsara yekugadzira kupfuura yekare fekitori, ine zvigadzirwa zvitsva nemidziyo isu tinokwanisa kugutsa zvimwe zvinodiwa nevatengi. Iyo yekunhonga rudzi rwe pneumatic chishandiso chinoshandiswa kwazvo mumigodhi ind ...
Drum yairidzwa gore rega rega pazuva rekuvhurwa kwefekitori mushure mekuratidzira kwemazororo emitambo uye yatova gungano muQihong, inoratidza basa rakanaka reboka pakati pe qihong nhengo. Chiitiko ichi chakatangwa iyo fekitori painotanga, panguva iyoyo isu tiri mu trou ...